အသက်(၃၀)အရွယ်မှာ စမတ်ကျနေဖို့ အချက်(၇)ချက် - For her Myanmar
အသက်(၃၀)အရွယ်မှာ စမတ်ကျနေဖို့ အချက်(၇)ချက်
တည်ငြိမ်တဲ့အလှကို ပိုလွင်အောင် ဘယ်အရာတွေက ပံ့ပိုးပေးမလဲ?
Rin ဒီတစ်ပတ်အတွက် ဆောင်းပါးကိုတော့ fashion tips တွေပြောဖို့ ရွေးထားပေးပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြား ဖြစ်သွားအောင် ဆယ်ကျော်သက်တွေအတွက် မဟုတ်ဘဲ သက်လတ်ပိုင်း ရင့်ကျက်တဲ့ မမတွေအတွက်ပေါ့။ အသက်၃၀မှာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှဟာ ရင့်ကျက်တည်ငြိမ်တဲ့အလှပါ။ တစ်နည်းပြောရမယ်ဆိုရင် အထက်တန်းကျတဲ့ အလှပေါ့။ ဈေးကြီးပေးဝယ်မှ အထက်တန်းတန်းကျကျဖြစ်တာ မဟုတ်ဘူးနော်… မှန်မှန်ကန်ကန် ရွေးချယ်တတ်ဖို့သာ အရေးကြီးတာပါ။
အသက်၃၀အရွယ်အတွက် သိထားသင့်တဲ့ fashion tipsတွေက…..
(၁) ဂျင်းဘောင်းဘီ ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာ အရမ်းကျပ်တဲ့ skinny jeansတွေကို ရှောင်ပါ။
အသက်၃၀ ဆိုတာ တည်ငြိမ်ရင့်ကျက်တဲ့ အလှကို ပြသရမယ့် အရွယ်ဖြစ်လို့ ကလေးဆန်ပြီး ကိုယ့်ကို အထင်သေးစေမယ့် ဘောင်းဘီ ကျပ်ကျပ်တွေ ဝတ်တာ ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အနေတော် မကျပ်မပွ ဘောင်းဘီတွေသာ ရွေးဝယ်ထားသင့်တယ်နော်။
(၂) ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ကိုယ်ကျပ်အင်္ကျီလေး တစ်ထည်တော့ ယောင်းတို့ အဝတ်ဗီရိုထဲမှာ မရှိမဖြစ် ဆောင်ထားပါ။
ကိုယ်ကျပ် အင်္ကျီလေးက ယောင်းတို့ရဲ့ လှပတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပေါ်လွင်စေပြီး အထက်တန်းကျတဲ့ အသွင်ကိုပေးနိုင်မှာပါ။ အမည်းရောင်နဲ့ အသားရောင်ကတော့ ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံးပေါ့။
Related Article >>> ဆွယ်တာလေး ၂ထည်ရှိရုံနဲ့ လန်းနေမယ့် ဆောင်းဖက်ရှင်
(၃) ဒူးဖုံး စကဒ်အရှည်တွေ ဝတ်ပါ။
အများအမြင် ခန့်ညားအောင် စကဒ်အတိုတွေ ဝတ်တာရပ်ပြီး ဒူးဖုံးစကပ်တွေ ဝတ်သင့်ပါတယ်။
အပွင့်ရိုက်စကဒ် အရှည်လေးတွေက တည်ငြိမ်ပြီး မိန်းမဆန်တဲ့ အလှကို ပေးနိုင်မှာပါ။ Pencil စကဒ်တွေ ဝတ်မယ်ဆိုရင် classyဖြစ်တဲ့ နက်ပြာရောင်နဲ့ အနက်ရောင်ကို ရွေးချယ် ဝတ်သင့်ပါတယ်။
ရှပ်အင်္ကျီအဖြူပြောင်လေးကို ခုနက ပြောသွားတဲ့ pencil စကဒ်အနီလေးတွဲဝတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် မရိုးမဆန်းနဲ့လှပနေမှာပါ။ ယောင်းတို့ အဝတ်ဘီရိုထဲမှာ ရှပ်အင်္ကျီရိုးရိုးလေးတွေ အများကြီးဝယ်ထားတဲ့အခါ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ စကဒ်၊ ဂျင်း တို့နဲ့ တွဲပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ အလှကို ဖန်တီးနိုင်တယ်။
Related Article >>> ရင့်ကျက်မှု ဖော်စပ်ရန် လိုက်နာသင့်သည့် အချက်(၁၀)ချက်
(၅)အရည်အသွေးကောင်းတဲ့ အတွင်းခံတွေဝယ်ဖို့ မနှမြောပါနဲ့။
ယောင်းတို့ရေ တစ်နေ့တာကို ယုံကြည်ချက်ရှိရှိလှနေစေဖို့ အတွင်းခံတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ အလှကို အကောင်းဆုံးပံ့ပိုး ပေးနိုင်တာက အတွင်းခံအဝတ်တွေဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
(၆) လက်ကိုင်အိတ်ကောင်းတစ်လုံး ရှိသင့်ပါတယ်။
အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဈေးကြီးကြီး၊ အရည်အသွေးကောင်းကောင်း လက်ကိုင်အိတ်တစ်လုံးတော့ ဆုချသင့်တယ်နော်။ အနက်ရောင် သားရေအိတ်တစ်လုံးက ဘယ်ဝတ်စုံနဲ့မဆို လိုက်ဖက်မှာပါ။
ယောင်းတို့ရေ ဒါ့အပြင် မိမိကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့တစ်မျိုးရှိဖို့ အမျိုးအစားကောင်းတဲ့ ရေမွှေးပုလင်းလေးတွေ ဆောင်ထားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။
ဒီအချက်တွေ အပြင် အရေးအကြီးဆုံး အချက်က ဘာလဲသိလား?
(၈) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု
ဖက်ရှင် ဘယ်လောက်လန်းလန်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု မရှိဘူးဆိုရင်တော့ လန်းတယ် ဆွဲဆောင်မှု ရှိတယ်လို့ ဘယ်ဆိုနိုင်လေမလဲ။ သူများတွေ အမြင်ပေါ် မှီခိုတဲ့ ယုံကြည်မှုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ ယုံကြည်မှုမျိုးပေါ့။
ကဲ…. အောင်မြင်ကျော်ကြားပြီး ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ မမတွေ ဖြစ်ကြပါစေရှင်။
တညျငွိမျတဲ့အလှကို ပိုလှငျအောငျ ဘယျအရာတှကေ ပံ့ပိုးပေးမလဲ?
Rin ဒီတဈပတျအတှကျ ဆောငျးပါးကိုတော့ fashion tips တှပွေောဖို့ ရှေးထားပေးပါတယျ။ ထူးထူးခွားခွား ဖွဈသှားအောငျ ဆယျကြျောသကျတှအေတှကျ မဟုတျဘဲ သကျလတျပိုငျး ရငျ့ကကျြတဲ့ မမတှအေတှကျပေါ့။ အသကျ၃၀မှာ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ အလှဟာ ရငျ့ကကျြတညျငွိမျတဲ့အလှပါ။ တဈနညျးပွောရမယျဆိုရငျ အထကျတနျးကတြဲ့ အလှပေါ့။ ဈေးကွီးပေးဝယျမှ အထကျတနျးတနျးကကြဖြွဈတာ မဟုတျဘူးနျော… မှနျမှနျကနျကနျ ရှေးခယျြတတျဖို့သာ အရေးကွီးတာပါ။
အသကျ၃၀အရှယျအတှကျ သိထားသငျ့တဲ့ fashion tipsတှကေ…..
(၁) ဂငျြးဘောငျးဘီ ရှေးခယျြတဲ့အခါမှာ အရမျးကပျြတဲ့ skinny jeansတှကေို ရှောငျပါ။
အသကျ၃၀ ဆိုတာ တညျငွိမျရငျ့ကကျြတဲ့ အလှကို ပွသရမယျ့ အရှယျဖွဈလို့ ကလေးဆနျပွီး ကိုယျ့ကို အထငျသေးစမေယျ့ ဘောငျးဘီ ကပျြကပျြတှေ ဝတျတာ ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ ခန်ဓာကိုယျနဲ့ အနတေျော မကပျြမပှ ဘောငျးဘီတှသော ရှေးဝယျထားသငျ့တယျနျော။
(၂) ရိုးရိုးရှငျးရှငျး ကိုယျကပျြအင်ျကြီလေး တဈထညျတော့ ယောငျးတို့ အဝတျဗီရိုထဲမှာ မရှိမဖွဈ ဆောငျထားပါ။
ကိုယျကပျြ အင်ျကြီလေးက ယောငျးတို့ရဲ့ လှပတဲ့ ခန်ဓာကိုယျကို ပျေါလှငျစပွေီး အထကျတနျးကတြဲ့ အသှငျကိုပေးနိုငျမှာပါ။ အမညျးရောငျနဲ့ အသားရောငျကတော့ ဆှဲဆောငျမှု အရှိဆုံးပေါ့။
Related Article >>> ဆှယျတာလေး ၂ထညျရှိရုံနဲ့ လနျးနမေယျ့ ဆောငျးဖကျရှငျ
(၃) ဒူးဖုံး စကဒျအရှညျတှေ ဝတျပါ။
အမြားအမွငျ ခနျ့ညားအောငျ စကဒျအတိုတှေ ဝတျတာရပျပွီး ဒူးဖုံးစကပျတှေ ဝတျသငျ့ပါတယျ။
အပှငျ့ရိုကျစကဒျ အရှညျလေးတှကေ တညျငွိမျပွီး မိနျးမဆနျတဲ့ အလှကို ပေးနိုငျမှာပါ။ Pencil စကဒျတှေ ဝတျမယျဆိုရငျ classyဖွဈတဲ့ နကျပွာရောငျနဲ့ အနကျရောငျကို ရှေးခယျြ ဝတျသငျ့ပါတယျ။
ရှပျအင်ျကြီအဖွူပွောငျလေးကို ခုနက ပွောသှားတဲ့ pencil စကဒျအနီလေးတှဲဝတျလိုကျမယျဆိုရငျ မရိုးမဆနျးနဲ့လှပနမှောပါ။ ယောငျးတို့ အဝတျဘီရိုထဲမှာ ရှပျအင်ျကြီရိုးရိုးလေးတှေ အမြားကွီးဝယျထားတဲ့အခါ ကွိုကျနှဈသကျရာ စကဒျ၊ ဂငျြး တို့နဲ့ တှဲပွီး ရိုးရှငျးတဲ့ အလှကို ဖနျတီးနိုငျတယျ။
Related Article >>> ရငျ့ကကျြမှု ဖျောစပျရနျ လိုကျနာသငျ့သညျ့ အခကျြ(၁၀)ခကျြ
(၅) အရညျအသှေးကောငျးတဲ့ အတှငျးခံတှဝေယျဖို့ မနှမွောပါနဲ့။
ယောငျးတို့ရေ တဈနတေ့ာကို ယုံကွညျခကျြရှိရှိလှနစေဖေို့ အတှငျးခံတှရေဲ့ အခနျးကဏ်ဍကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ မိနျးမတဈယောကျရဲ့ အလှကို အကောငျးဆုံးပံ့ပိုး ပေးနိုငျတာက အတှငျးခံအဝတျတှဆေိုတာ မမပေ့ါနဲ့။
(၆) လကျကိုငျအိတျကောငျးတဈလုံး ရှိသငျ့ပါတယျ။
အလုပျကွိုးစားတဲ့ မိမိကိုယျကို ဂုဏျပွုတဲ့အနနေဲ့ ဈေးကွီးကွီး၊ အရညျအသှေးကောငျးကောငျး လကျကိုငျအိတျတဈလုံးတော့ ဆုခသြငျ့တယျနျော။ အနကျရောငျ သားရအေိတျတဈလုံးက ဘယျဝတျစုံနဲ့မဆို လိုကျဖကျမှာပါ။
ယောငျးတို့ရေ ဒါ့အပွငျ မိမိကို ကိုယျစားပွုတဲ့ ကိုယျသငျးနံ့တဈမြိုးရှိဖို့ အမြိုးအစားကောငျးတဲ့ ရမှေေးပုလငျးလေးတှေ ဆောငျထားဖို့လညျး မမပေ့ါနဲ့။
ဒီအခကျြတှေ အပွငျ အရေးအကွီးဆုံး အခကျြက ဘာလဲသိလား?
(၈) ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု
ဖကျရှငျ ဘယျလောကျလနျးလနျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှု မရှိဘူးဆိုရငျတော့ လနျးတယျ ဆှဲဆောငျမှု ရှိတယျလို့ ဘယျဆိုနိုငျလမေလဲ။ သူမြားတှေ အမွငျပျေါ မှီခိုတဲ့ ယုံကွညျမှုမဟုတျဘဲ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ အကောငျးမွငျတတျတဲ့ ယုံကွညျမှုမြိုးပေါ့။
ကဲ…. အောငျမွငျကြျောကွားပွီး ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ မမတှေ ဖွဈကွပါစရှေငျ။
Tags: Smart, Style, women
အက်ဒမင့်ကိုယ်တွေ့ ဘာသာစကားလေ့လာရာမှာ အထောက်အကူပြုပေးတဲ့ နည်း(၇)နည်း
Rin June 14, 2017